ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး အထိုးခံပြီး တဲ့ မြန် မာ ဆရာဝန်တဦး ပြောပြ တဲ့ ကာကွယ်ဆေး အကြောင်း – GaMone Media
Homepage / Knowledge / ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး အထိုးခံပြီး တဲ့ မြန် မာ ဆရာဝန်တဦး ပြောပြ တဲ့ ကာကွယ်ဆေး အကြောင်း
ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး အထိုးခံပြီး တဲ့ မြန် မာ ဆရာဝန်တဦး ပြောပြ တဲ့ ကာကွယ်ဆေး အကြောင်း
ကာကွယ်ဆေး ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ ဘယ်သူတွေ ထိုးနိုင်လဲ။ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထား သင့်လဲ ဆိုတာကို မြန်မာလို အတိုချုပ် ဘာသာပြန်ရေးသား လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
(၁) ဆေးအာနိသင် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ?
Pfizer ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ်−၁၉ ကို တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် လူ ၄၀,၀၀၀ (လေးသောင်း) ကျော်ပါဝင်တဲ့ ဆေးသိပ္ပံ စမ်းသပ်ချက်အရ ဆေးထိုးထားလျှင် ကိုဗစ်ရောဂါကို ၉၅ % တားဆီးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ် (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၇၀% ထက် များစွာပိုကောင်းပါတယ်.)
ကာကွယ်ဆေးကို ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးသူများတွင် ၂၁ ရက်ခြားပြီး ၂ ကြိမ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။
(၃) ဆေး ‘မ’ ထိုးသင့်သူများ
Pfizer ကုမ္ပဏီထုတ် ကာကွယ်ဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်သူများ၊ ရက် ၉၀ အတွင်း ကိုဗစ် ဖြစ်ဖူးသူများ၊ ကိုဗစ် သံသယ လူနာများ၊ ကိုယ်ခံအားနည်း ရောဂါရှင်များ၊ သွေးကျဲဆေး သောက်နေသူများ၊
နို့တိုက်မိခင်များ ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ မှတ်ချက်။ အထက်ပါအုပ်စုများမှာ ဆရာဝန်ထောက်ခံလျှင် ဆေးထိုးနိုင်ပါတယ်။
(၄) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာကျင် (သို့) အောင့် နေခြင်း၊ ဆေးထိုးသည့် နေရာ တွင် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဖျားငွေ့ငွေ့တက်ခြင်း၊ နွမ်းလျခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဆေးထိုးပြီးနောက် လက်မောင်းအောင့်သလို ခံစားရပြီး၊ နောက်ရက် ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်။
(၅) ဆေးဓါတ်မတည့်ခြင်း (allergic reaction) ဖြစ်ရင်တော့ နီးစပ်ရာ ဆေးရုံကို အမြန် သွားသင့်ပါတယ်။
ကပ်ရောဂါကြီး နိဂုံးချုပ်ပြီး ပုံမှန် အနေအထားပြန်ရောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ‘ဆေး’ အမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင် ဆုတောင်းနေပါတယ် ခင်ဗျာ
Dr. ကျော်ဇောဟိန်း, MD, PhD
ကာကြယ္ေဆး ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ။ ဘယ္သူေတြ ထိုးႏိုင္လဲ။ ဘာေတြ ျပင္ဆင္ထားသင့္လဲ ဆိုတာကို ျမန္မာလို အတိုခ်ဳပ္ ဘာသာျပန္ေရးသား လိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။
(၁) ေဆးအာနိသင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလဲ?
Pfizer ကာကြယ္ေဆးက ကိုဗစ္−၁၉ ကို တားဆီးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္ လူ ၄၀,၀၀၀ (ေလးေသာင္း) ေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ ေဆးသိပၸံ စမ္းသပ္ခ်က္အရ ေဆးထိုးထားလွ်င္ ကိုဗစ္ေရာဂါကို ၉၅ % တားဆီးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္ (ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၇၀% ထက္ မ်ားစြာပိုေကာင္းပါတယ္.)
ကာကြယ္ေဆးကို ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ားတြင္ ၂၁ ရက္ျခားၿပီး ၂ ႀကိမ္ထိုးႏိုင္ပါတယ္။
(၃) ေဆး ‘မ’ ထိုးသင့္သူမ်ား
Pfizer ကုမၸဏီထုတ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားနဲ႔ ဓါတ္မတည့္သူမ်ား၊ ရက္ ၉၀ အတြင္း ကိုဗစ္ ျဖစ္ဖူးသူမ်ား၊ ကိုဗစ္ သံသယ လူနာမ်ား၊ ကိုယ္ခံအားနည္း ေရာဂါရွင္မ်ား၊ ေသြးက်ဲေဆး ေသာက္ေနသူမ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါအုပ္စုမ်ားမွာ ဆရာဝန္ေထာက္ခံလွ်င္ ေဆးထိုးႏိုင္ပါတယ္။
(၄) ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ေဆးထိုးသည့္ေနရာတြင္ နာက်င္ (သို႔) ေအာင့္ ေနျခင္း၊ ေဆးထိုးသည့္ ေနရာတြင္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အဖ်ားေငြ႕ေငြ႕တက္ျခင္း၊ ႏြမ္းလ်ျခင္း၊ ခ်မ္းတုန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ လက္ေမာင္းေအာင့္သလို ခံစားရၿပီး၊ ေနာက္ရက္ ျပန္ေကာင္းသြားပါတယ္။
(၅) ေဆးဓါတ္မတည့္ျခင္း (allergic reaction) ျဖစ္ရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံကို အျမန္ သြားသင့္ပါတယ္။
ကပ္ေရာဂါႀကီး နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး ပုံမွန္ အေနအထားျပန္ေရာက္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ‘ေဆး’ အျမန္ဆုံးေရာက္ရွိေအာင္ ဆုေတာင္းေနပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
Dr. ေက်ာ္ေဇာဟိန္း, MD, PhD
Previous post မိုးတွေညို လာပီ ဆို ရင် လွမ်းချင် သလို ဖြစ်လာတယ် ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း
Next post ရင်ဖို စရာကောင်း တဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ သိမ်းကျုံး ဖမ်းစား လိုက် တဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း